mhepo dzinotenderera zuva chemasanganiswa marongedzero musha uye dzokutengesa - Ningbo Haitian Holding Group Co., Ltd
mhepo dzinotenderera zuva chemasanganiswa marongedzero musha uye dzokutengesa
Maererano zhinji renewable simba nyanzvi, duku "chemasanganiswa" yemagetsi hurongwa kuti rinobatanidza mhepo uye solar (photovoltaic) ruzivo inopa akawanda zvakwakanakira pamusoro kana kuroorwa system.In rakawanda nzvimbo, mhepo aimhanya vakaderera muzhizha apo zuva rikasabuda chakajeka uye chakarebesa. Mhepo iri simba munguva yechando kana zvishoma chezuva iripo. Nekuti yepamusoro anodawo nguva mhepo uye rezuva nehurongwa kuitika panguva dzakasiyana zuva uye gore, vakaberekwa hurongwa vangangoramba kubereka simba kana uchida izvozvo.
1. PV Array: A uwandu PV ukomba zvakabatana muna dzinotevedzana uye / kana zvakafanana kupa DC goho kubva chiitiko irradiance. Dzidziso uye rakarereka ukomba izvi zvinokosha zvakagadzirwa parameters, uyewo shading kubva akapoteredza zvakavhara.
2. Wind turbine: Izvi kuiswa pamusoro neshongwe varefu, anounganidza kinetic simba kubva mhepo uye vatendeuki kuti magetsi kuti inowirirana musha wacho magetsi hurongwa.
3. Mbeu dzakauchikwa controller: kudzora bhatiri kubhengi mutariri uye tiite musoro uye kuchengeteka.
4. Battery bhangi: zvinogona chete bhatiri kana akawanda mabhatiri chokuita pamwe kusika chaizvoizvo chimwe bhatiri chikuru kwaida voltage uye BSN-awa chinzvimbo. Mune dzimwe nzira kuti bhatiri configuration uye kukwanisa zvinokosha zvemagetsi simba chisarudzo, uye nokuchenjera kunogona kubatsira achisimbisa yaivakwanira zvemagetsi simba uyewo maitiro riri nyore kushandisa uye kuramba.
5. Inverter: A simba convert kuti ezvo inverts ± ari DC simba kubva ukomba kupinda AC simba.
6. mitoro: inomirira pomumbure kwakabatana midziyo muimba kuti vanopiwa kubva inverter (AC mitoro), kana kubva bhatiri kubhengi (DC mitoro).